Indlu yeKendall Jenner yeLos Angeles Iqolile kwaye Yinto eQhelekileyo
When iza kumakhaya abo, i-Kardashian-Jenners yonke inezitayile ezihlukileyo kakhulu. Kodwa into abanayo ngokufanayo kukucamngca okuhle njengoko siye sabona kuyo yonke le minyaka njengoko betshintsha amakhaya abo kunye nokuhombisa ngokungathi batshintsha iimpahla. Nokuba kunjalo U-Kim no-Kanye's ikhaya elincinci okanye KaKylie Imibala ecwebileyo, usapho oludumileyo luye lwangqina ukuba ngodumo olukhulu kunye nethamsanqa liza nokuphila okukhulu. Mnye umntu elakhe ikhaya esingazange simbone ngoku Kendall Jenner. Indlu kaKendall Jenner
Ngombulelo kwi-Archaeological Digest, silifumene ithuba lokujonga ekhayeni laseLos Angeles elinephupha laseLos Angeles eliboniswe kwikhava ka-AD kaSeptemba.
Iqela lakhe loyilo, elaliquka duo-mama nonyana, uKathleen noTommy Clements, kunye noWaldo Fernandez bamangaliswa kakhulu kukuva umthengi wabo ominyaka ingama-24. “Ukuthanda kwakhe kwakumangalisa, kumnandi kakhulu kwaye kumnandi kunabanye usapho. Imo yakhe ayichazayo yayiphantsi kwaye iphantsi emhlabeni, " IiTommy Clements zikhumbula ukuya kwi-AD.
Nam ndakhwankqiswa kukubona ukuba ikhaya lakhe likhule ngakumbi ngokomzimba kwaye li-organic kwaye likude kakhulu kwaye linobuchopho, kodwa loo nto Kendall Jenner yeyakho -ehlala ingalindelekanga.
"Eli likhaya lokuqala ndigqibezele ngokupheleleyo, kwaye ndicinga ukuba luphawu oluqinisekileyo lokuba ndingubani kwaye ndithanda ntoni," utshilo uKendall. “Ekugqibeleni, ndiseyintokazi e-LA, ndizama ukonwaba.”
UKendall wathenga umzi, owawungumnikazi ngaphambili Charlie Sheen, ngo-2017. Emva kokuyithenga, indlu yahamba nge-revamp epheleleyo. Njengenxalenye yereodel, waguqula elinye lamagumbi amahlanu okulala aba yigumbi elifanelekileyo kunye negumbi elimnandi alibiza ngokuba "yiHana Montana yegumbi." Igumbi elinobukhazikhazi linodonga oluzaliswe yimifanekiso yazo zonke iiqweqwe zemagazini. Uye wandisa ubungakanani beshawa yakhe yokuhlambela kwaye wanyusa amagumbi egumbini. Igumbi lokuhlambela linento ekubhekiswa kuyo njengebhedi enkulu yegolide, eyenziwe ngobhedu.
Phaya ecaleni kwendlela, kukho ingxondorha ebengezelayo eludongeni James Turrell -Umculi awayefunde ngaye kumkhwe wakhe u-Kanye West. Ndazisiwe emsebenzini wakhe ngu-Kanye, osebenzisana naye, UKendall uyachaza. "Ndinqwenele ukuba le ndawo ibe yeyona nto igxile kuyo, kwaye ndinoluvo lokuba apha."
U-Kendall uguqule igumbi lemidlalo yeqonga laba yindawo yokubonisa ubugcisa apho apenda khona ukunceda ukunciphisa uxinzelelo, alubiza ngokuba luhlobo lonyango. Ubuyele kwigunjana elikhulu alicoca rhoqo emva kweenyanga ezimbini. Kude kwindawo yokuhlala, unesithuba esenziwe kakuhle sepatio kunye nendawo yecape kunye nendawo ye barbecue.
"Ubomi bam buquka isiphithiphithi esininzi nokuhamba kunye namandla aphezulu, ngenxa yoko bendifuna ikhaya eliziva likhululekile, indawo endinokuma kuyo ndiphumle," utshilo uKendall. Andinguye umntu omkhulu wepati. Akukho baninzi banomsindo oqhubekayo apha. Ndiyathanda ukuvula umculo, ukukhanyisa umlilo kunye namakhandlela, kunye nokubukela imidlalo yeNBA nabahlobo bam. " Indlu kaKendall Jenner
Jonga ngokujikeleza ekhaya elinephupha likaKendall Jenner eLos Angeles kwaye uqhubeke nokhenketho lwevidiyo…
BUKA: Ngaphakathi uKendall Jenner's Los Angeles
Ityala lemifanekiso: I-Digestological Digest Indlu kaKendall Jenner
Kakhulu! Ulwakhiwo lweDrake's Toronto Ngaba Uya kuyibuyisela iiNjongo zeNdlu yakho | I-CR Cribs
ukudaya uyilo umntu wodumo ekhaya Okufumaneka ukulungiswa ngaphakathi kendall jenner IKendall Jenner Los Angeles Ikhaya ikhaya elihle Iphepha lokushicilela
UCollins Badewa Julayi 30, 2020
I-Vivica Fox ijika i-56: UkuJonga uMva kwezinye zeeHlobo zakhe eziNgcono zeFashoni